Malinggohomestay- Attic Cottage - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDaniel
Eyakhelwe phakathi kweenduli ezintle, kude ne-hustles yedolophu yidolophana encinci, apho ndiqhuba khona ikhaya lam- "Malinggo". I-Malinggo ligama lohlobo lwe-bamboo olufumaneka ekuhlaleni. I-Homestay ijikelezwe yimithi emihle, iintyatyambo, iinduli, abahlali bendawo kunye namasimi aphilayo. Ukuhamba, ukukhwela intaba, ukuhamba elalini kunye nokubukela iintaka zezinye zeziganeko ezinokuthi zenziwe apha.
Yitya ukutya kwalapha kunye notywala, wonwabele indalo kwaye uphile njengomntu wasekhaya xa ulapha konke ngokuhlala nathi.
Njengoko usuka eSiliguri usiya eSikkim, uya kudibana nedolophu encinci ebizwa ngokuba yiRanipool. Indawo yokuhlala imalunga nemizuzu engama-40 ukusuka eRanipool. Ungacela umqhubi ukuba athathe ilungelo ukusuka eRanipool ekujikeni kwaye aqhube ukuya e-Assamlingzey ngedolophu yaseRanipool. Ukuba kukho nayiphi na ingxaki, ndicela unditsalele umnxeba.
Imizuzu engama-40 ukusuka kwidolophu encinci yaseRanipool yiMalinggo Homestay. Indawo ubukhulu becala yilali yendawo ezaliswe yimithi, iintyatyambo, iintaba kunye nabahlali basekuhlaleni. Yindawo efanelekileyo yokuba kude nekhaya kwaye ube namava into entsha kunye nenomdla. Ukuba ufuna ukuzama ukuhamba, ukukhwela intaba okanye ukuhamba uhambo lwasezilalini, sinokulungiselela okufanayo ngentlawulo eyongezelelweyo. Kuzo zonke ezi zinto, masazise kwangaphambili.
I-attic cottage inamagumbi amabini, i-attic kunye negumbi lokuhlambela eliqhotyoshelweyo. Isithuba esipheleleyo senziwe ngezinto ezifumaneka kwindawo ezifana nemithi kunye ne-bamboos. Umgangatho wonke, izinyuko kunye nesilingi zenziwe ngamaplanga. Le ndawo ineebhedi ezimbini ezihlala abantu abane. Kwimeko yabantu abongezelelweyo, i-attic inendawo eyaneleyo yokuhlalisa abantu abasibhozo.
Imozulu ishushu kwaye inelanga amaxesha amaninzi. Kuhlala kubanda ebusika (Okthobha-Februwari). Nceda uphathe iimpahla ezifudumeleyo ukuba uceba uhambo ngala maxesha. Zonke ezinye iinyanga zihlala zinemvula, nangona kuya kuba nelanga ngexesha lemini. Nangona kunjalo, kufuneka uphathe iambrela ngalo lonke ixesha ucwangcisa ngezi ntsuku.
Ubumelwane obusondeleyo yilali yonke enabantu bendawo abahlala kuyo. Izaliswe yimithi, iintaba, amasimi, iintyatyambo kunye nezinye iindawo ezithandwa ngabakhenkethi. Ilali igcinwa kwaye igcinwe icocekile ngabahlali. Inezinye iindawo zokugcina izityalo kunye namasimi aphilayo.
Kukho igadi ebizwa ngokuba yiSaramsa kumgama omalunga nemizuzu engama-30 ngemoto. Idolophu ekufutshane iseRanipool. Kukho iindawo zokutyela ezilungileyo, iibhega ezidityanisiweyo, ukutya okukhawulezayo, iindawo zentselo, iibhari kunye nezinye iindawo zokuzipholela apha. Ngaphaya koko, uya kufumana iidisco, iigadi ezinedama lokuqubha kunye nezinye iindawo ezikufutshane zokubona. Singacebisa iindawo xa sele ulapha.
Ndihlala nosapho lwam enkomponi enye. Sihlala singaphakathi kwaye sijikeleza, sivuleleke kakhulu ekunxibelelaneni kwaye sikuncede ubone iindawo.